40 menus oo xiiso leh oo xiiso leh | Abuurista khadka tooska ah
Carlos Sanchez | | General, Dhiirrigelinta, Khayraadka
Waxaan kuu xaqiijinayaa in aysan sahlaneyn in la qorsheeyo liistada badhanka wanaagsan ee bogga, oo waxaan dhihi karnaa waxay ka mid tahay seddexda ama afarta cunsur ee ugu muhiimsan isticmaalka iyo marin u helka degelkeenna inuu sax noqdo.
En Naqshadaynta Pro Blog waxay soo ururiyeen isku soo uruurinta afartanka menu ee ugu wanaagsanaa ee ay ku arkeen meesha, Runtuna waxay tahay inaan helay fikrado badan (oo aanan koobiyeynin) menusyadayda mustaqbalka, gaar ahaan kuwa multilevel-ka ah oo aad u dhib badan oo ka dhigaya inay u muuqdaan kuwo wanaagsan.
Ka dib boodboodkii oo dhan, kuna xidhan boggooda internet-ka.
1. Dhar London
Liistada quruxda yar ee quruxda badan leh midabyo dhakhso leh iyo qaab isku dhafan.
2. Nopoko Sawirada
Taabasho khafiif ah oo leh hoos hoos leh iyo qaab asal qurux badan.
3. Xeerka Dhaqanka
Liiska qaabka iPhone ee barnaamijka Iphone.
4. Box Doon
Fudud, isafgarad leh oo jilicsan
5. Mac Bakayle
Midabada khafiifka ah iyo astaamaha hal-abuurka ah ayaa ka dhigaya liiskaan mid ka soo dhex muuqda dadka.
6. Warbaahinta Kyan
Midabada adag iyo Saamaynta MouseOver ee fudud ayaa ka dhigaya meeniskan quruxsan.
Liis qurux badan oo midabbo badan leh. Gaariga yar ee cagaaran wuxuu muujinayaa bogga hadda jira.
8. Dhagaxa Tooska ah
Liis qurux badan oo madoow oo madoow leh oo xarfaha lagu dhajiyay.
Liis fudud oo leh midabbo qurux badan oo is-khilaafsan.
Naqshad kale oo fudud, midab khafiif ah leh tabs gaar ah.
11. Buugga Mad Mad:
Liiska madow iyo madow oo leh saameyn hufan.
Liis fudud oo dhowr saf ah oo midabyo buluug jilicsan leh.
13. Duufaan App
Tusaale heer sare ah oo ah liistada liistada dhowr-khadadka yar yar.
14. Waxaa Dhisay Buffalo
Meelaha ballaadhan iyo noocyada fudud ayaa siinaya menu-gaan muuqaal qurxan oo casri ah.
15. Bidix Cadi
Liis kale oo badan oo farabadan oo leh nidaam midab weyn.
16. Sawir gacmeed
Liis dhab ah oo firfircoon. Thumbnail ayaa soo baxa markasta oo aad dul degto shayga cuntada lagu cabo.
17. Mia iyo Maggie
Liis qabow oo fara badan oo fara badan oo leh hoosta ka xariiqda dhaqanka.
Tab ballaaran iyo midabbo fudud.
Liis kale oo ballaadhan oo hufan oo leh hufnaan hufan.
U cusboonaysiinta isticmaalka nambarada shay kasta oo menu ah.
Saamaynta nuuradda-sabuuradda ayaa ka dhigaysa liistada mid aan caadi ahayn oo haddana hal abuur leh.
Liis kale oo weyn oo leh noocyo xarrago leh iyo midabbo iska soo horjeed wanaagsan.
Liis runtii hal abuur leh oo gaar u ah DJ.
Midabada qurxoon, noocyada xarrago leh iyo saamaynta iftiinka.
25. Gabadha Resume-ka ah
Liis kale oo hal abuur leh oo muuqaal quruxsan oo caadi ah.
26. Cirka Larkin
Shay kasta oo ku jira menu-ka ayaa midabkiisu kala duwan yahay markii aad korka ka jafto. Runtii hal abuur iyo baashaal.
27. Darbiga Naqshadeeyaha Webka
Liis kale oo qaab xarago leh oo xayeysiis ah.
Mid ka mid ah liiska ugu xarrago badan. Isticmaalka wanaagsan ee rasaasta qaabdhismeedka ugu yar.
Liis toosan oo ballaadhin ah oo leh midabyo badan.
Falaad caadi ah iyo goobaabin ayaa tilmaamaysa bogga hadda socda. Font-ka caadiga ahi wuxuu kaloo ku daraa quruxda miiskan.
31. Xalka Degmooyinka
Shay kasta oo ku yaal liiskan taagan wuxuu isu beddelayaa midab kale markii aad dul marto dusha.
Liiska toosan ee madow-iyo-cad ee qaabka kaarka boostada.
Liiska xarrago leh, ee xariiqyo badan oo toosan.
34. Awoodda Qoraalka
Noocyada casriga ah iyo saameynta hufan ayaa menu ka dhigaya mid muuqda.
Liis midab leh oo leh far waaweyn iyo astaamo dheeri ah.
Liis kale oo badan oo xariiqyo badan leh oo asalkiisu fiicanyahay.
37. Nando Naqshadeeye
Liis aan caadi ahayn oo leh saamayn xusuus qor ah.
38. Warbaahinta Pixel
Fudud oo qurux badan
39. Nick Xayeysiiska
Liis aad u firfircoon oo saameyn weyn leh iyo midabbo iska soo horjeedda.
40. Miami habeenkii
Liis kale oo toosan oo leh saameyn hufan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 40 liiska menu xiiso leh